साउन २७, २०७८ बुधबार 184
श्रीमानलाई हामीलाई समस्या भयो भनेर फोन गर्दा तेरो उमेर छंदै अर्को केटा खोजेर जा, पछि झन अप्ठेरो हुन्छ, मलाई तेरो मतलब छैन भनेर जवाफ दिएको श्रीमतीको भनाई छ । उनका दुई छोरा छन् । छोरालाई हुर्काउन र दुई छाक खान पनि दिन नसक्ने अवस्था भए पछि उनले आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्न मिडिया गुहारेकी छन् ।https://youtu.be/hZ12NUfudm0
Prevधेरै त गरेको छैन् ! तर मलाई सिम्पल पोज मन पर्छ सबिना!
Nextभासु भि,रमा जिप दु,र्घटना २जनाको मृ,त्यु ५ घा,इते
दसैंको नजिक जम्मा १६ दिन स्कुल खोल्न किन तम्तयारी? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन